iPhone Nọgidesiri Na Apple Logo? Nke a bụ The Real Idozi. - Iphone
enwere m ike iji iphone kpọọ oku na wifi
ios 10 enweghị ike ịlele maka mmelite
kedu ihe ọ pụtara mgbe ị hụrụ 333
sistemụ na -ewepụta oghere mac
ipod nọgidesiri ike n'ụdị ekweisi
Ihe niile dị mma ruo mgbe iPhone gị weghachiri wee rapara na akara Apple. I chere, 'Ma eleghị anya, ọ na-ewe ogologo oge karịa,' mana ngwa ngwa ghọtara na ihe adịghị mma. Tried gbalịrị ịtọgharịa gị iPhone, ịpịnye ya na kọmputa gị, ọ nweghịkwa ihe na-arụ ọrụ. N'isiokwu a, m ga-akọwa ihe mere gị iPhone rapaara na Apple logo na kpọmkwem otu esi edozi ya.
Abụ m onye bụbu Apple Tech. Nke a bụ Eziokwu:
Enwere otutu ozi banyere isiokwu a n’ebe ahụ, na ọ bụ n’ihi na ọ bụ nsogbu nkịtị. Isiokwu ndị ọzọ niile m hụrụ bụ nke ezighi ezi ma ọ bụ ezughi oke.
Dịka Apple tech, enwere m ahụmịhe mbụ na-arụ ọrụ na narị narị iPhones, amaara m na iPhones na-arapara na akara Apple maka ọtụtụ ebumnuche. Mara ihe kpatara iPhone gị ji arapara na Apple logo na mbụ ga-enyere gị aka igbochi ya ịme ọzọ.
otu esi edozi batrị iphone m
Pịa ebe a ma ọ bụrụ na ọ ga-amasị gị ịmafe n'aka nri ndị ndozi ahụ. Nọgide na-agụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmụ ihe iPhone gị bụ n'ezie na-eme mgbe ọ na-egosi na Apple logo na ihuenyo otú ị ghọtara ihe mejọrọ.
Ọzọ, aga m enyere gị aka ịmata ihe kpatara nsogbu ahụ na mbụ. Mgbe ụfọdụ ọ na-apụta ìhè, mana ọtụtụ oge ọ bụghị. Mgbe anyị matara ihe kpatara nsogbu ahụ, m ga-akwado ụzọ kachasị mma iji dozie ya.
Kedu N'ezie Na-eme Mgbe Gị iPhone agbanwuru
Chee echiche banyere ihe niile ga - eme tupu ị dị njikere ịga ụtụtụ. Nwere ike iche maka ihe dịka ịme kọfị, ịsa ahụ, ma ọ bụ ịkwakọ nri ehihie maka ọrụ, mana ndị ahụ bụ ọrụ dị elu - ụdị ngwa dị na iPhone gị.
Anyị anaghị echekarị gbasara ihe ndị bụ isi na-eme na mbụ, n'ihi na ọ dị ka ọ na-eme na-akpaghị aka. Ọbụna tupu anyị esi n’àkwà anyị bilie, anyị na-agbatị, gbadata ihe mkpuchi ahụ, nọdụ ọdụ ma tinye ụkwụ anyị n’ala.
Gị iPhone adịchaghị iche. Mgbe iPhone gị malitere, ọ ga-agbanye ihe nhazi ya, lelee ebe nchekwa ya, ma setịpụ ihe ndị mejupụtara tupu ya emee ihe ọ bụla dị mgbagwoju anya, dị ka ịlele email gị ma ọ bụ na-agba ọsọ gị. Ndị a mmalite ọrụ eme na-akpaghị aka na ndabere dị ka gị iPhone na-egosiputa Apple logo.
Gịnị Mere My iPhone Nọgidesiri Na Apple Logo?
Gị iPhone rapaara na Apple logo n'ihi na ihe mehiere n'oge ya mmalite na-eme. N'adịghị ka mmadụ, iPhone gị enweghị ike ịrịọ maka enyemaka, yabụ na-akwụsị. Nwụrụ Anwụ. Apple logo, ruo mgbe ebighị ebi.
Chọpụta Nsogbu Ahụ
Ugbu a ka ị ghọtara gịnị kpatara akara Apple dị na iPhone gị, ọ na-enye aka ịkọwa nsogbu ahụ n'ụzọ dị iche: Ihe gbanwere na usoro mbido iPhone gị ma ọ naghị arụ ọrụ ọzọ. Ma gịnị gbanwere ya? Ngwa anaghị enweta usoro mmalite nke iPhone gị, yabụ na ọ bụghị ha kpatara ya. Ndị a bụ ohere:
iOS mmelite, weghachi, na nyefe data na kọmputa gị na iPhone gị nwee ike ịnweta ọrụ ya, yabụ ha nwere ike kpata nsogbu. Security software, ntụpọ USB Gịnị, na-ezighị ezi ọdụ ụgbọ mmiri USB niile nwere ike igbochi data nyefe usoro na-akpata nrụrụ ngwanrọ na nwere ike ime ka Apple logo na-rapaara na gị iPhone.
Ugboro abụọ: Otutu weebụsaịtị ndi ozo (na ufodu ndi oru Apple) na-eti mkpu, “Jailbreaker! Orụ gị nke ọma! ” oge obula ha huru nsogbu a, ma jailbreaking bụghị naanị ihe nwere ike ime ka gị na iPhone na-rapaara na Apple Logo. N'ikwu ya, ikike nke nsogbu dị elu mgbe ị jailbreak gị iPhone . Ọ bụghị naanị na usoro jailbreaking chọrọ ịweghachi zuru ezu, mana aha ya sitere n'eziokwu na ọ na-agbaji ngwa 'site n'ụlọ mkpọrọ', na-agafe nchebe Apple ma na-enye ha ohere ịnweta ọrụ nke iPhone gị. Nke a bụ naanị ndapụta ebe ngwa nwere ike eme ka gị na iPhone na-araparawo na Apple logo. Psst: M jailbroken m iPhone n'oge gara aga.
Hardware nsogbu: Anyị kwuru tupu gị iPhone achọpụtazi na ya ngwaike dị ka akụkụ nke mmalite ya na-eme. Ka anyị jiri Wi-Fi dị ka ihe atụ: Gị iPhone na-ekwu, 'Hey, Wi-Fi kaadị, gbanye antenna gị!' ma chere nzaghachi. Kaadị Wi-Fi gị, nke mmiri riri na nso nso a, ekwughi ihe ọ bụla azụ. Gị iPhone na-eche, ma chere, ma chere… ma nọgidere na akara Apple, ruo mgbe ebighị ebi.
Ọ dịghị otu-size-dabara-niile ngwọta maka nsogbu a. The ngwọta na-adabere na ihe mere gị iPhone na-rapaara na akpa ebe.
gịnị kpatara na iphone 6s gbakwunyere ụgwọ
1. Ike Tọgharia iPhone gị (Mana Ọ gaghị arụ ọrụ 99% nke Oge)
Ikekwe ị nọ na 1 pasent, mana na nke a ọ naghị afụ ụfụ ịnwale. A ike nrụpụta amanye gị iPhone ngwa ngwa gbanyụọ na azụ na, nke nwere ike mgbe ụfọdụ idozi a obere software glitch.
Ime ihe siri ike nrụpụta na iPhone 6S na ụdị ndị mbụ, pịa ma jide bọtịnụ Home (bọtịnụ okirikiri n'okpuru ngosipụta) na bọtịnụ ike ọnụ ruo mgbe ị hụrụ akara Apple apụ n'anya wee pụta na ihuenyo ahụ wee hapụ.
Ọ bụrụ na ị na-eji iPhone 7, pịa ma jide bọtịnụ ike na olu ala bọtịnụ ruo mgbe akara Apple ga-apụ n'anya ọzọ wee pụta na ihuenyo ahụ.
Ọ bụrụ na ị nwere iPhone 8 ma ọ bụ nke ọhụrụ, pịa ma hapụ bọtịnụ olu elu, wee pịa ma hapụ bọtịnụ olu ala, wee pịa ma jide bọtịnụ n'akụkụ ruo mgbe akara Apple ga-apụ n'anya ma pụta ọzọ.
2. iOS Update, Weghachi, na Data Nyefee Nsogbu N'etiti gị iPhone na Computer
A ọtụtụ nwere ike ịga na-ezighị ezi mgbe data ego n'anya zitere na kọmputa gị gị iPhone, karịsịa ọ bụrụ na ị na-eji PC. Gị iPhone bụ naanị ngwaọrụ mpụga na kọmputa gị, na ọtụtụ sọftụwia ndị ọzọ nwere ike ịbanye ma gbochie n'oge oge dị egwu nke mmelite iOS ma ọ bụ weghachite.
Ka anyị kwuo na ị na-eji iTunes iji melite ngwanrọ iPhone gị. Gị iPhone reboots (nke pụtara na ọ na-agbanyụ na ngwa ngwa laghachi) n'oge mmelite, mana na kọmputa gị ọ dị ka ị kwụpụrụ ya ma gbanye ya azụ.
Gị antivirus software nzọụkwụ na-ekwu, “Kwụsị! M ga-enyocha gị! ' ma na-egbochi nnyefe data. iTunes abord update, na gị iPhone na-ekpe ọkara emelitere na kpam kpam unusable. Na-emekarị, gị iPhone kicks n'ime mgbake mode na-egosiputa 'Jikọọ na iTunes', ma mgbe ụfọdụ ọ na-akawanye rapaara na Apple logo.
Ọ bụrụ na iPhone gị rapaara na akara Apple mgbe ị jiri iTunes iji melite, weghachite, ma ọ bụ bufee data na iPhone gị, ị ga-achọ iwepụ ngwanrọ nke oge kpatara nsogbu ahụ tupu ịmalite. Iji mụtakwuo banyere nsogbu nwere ike ime n'etiti iTunes na ngwanrọ ndị ọzọ, lelee ederede Apple banyere otu esi dozie nsogbu dị n’etiti iTunes na ngwanrọ nchekwa ndị ọzọ . Nsogbu a na - adịkarị na PC, mana nsogbu nyefe data nwere ike eme na Macs.
3. Lelee USB USB gị na ọdụ ụgbọ USB
Ọdụ USB ndị nwere nsogbu na ọdụ ụgbọ USB na PC na Macs nwere ike igbochi usoro nnyefe data ma mebie ngwanrọ nke iPhone gị. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu n'oge gara aga, nwalee eriri dị iche ma ọ bụ jikọọ iPhone gị na ọdụ ụgbọ USB dị iche. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọpụta ihe na-adịghị mma na PC gị, oge ụfọdụ ọ dị mfe iji kọmputa enyi gị mgbe ịchọrọ iweghachi iPhone gị.
4. Ndabere gị iPhone, Ọ bụrụ na Can Pụrụ
Tupu anyị aga n'ihu, ọ dị mkpa inwe a ndabere gị iPhone na iCloud , iTunes , ma ọ bụ Chọta . Ọ bụrụ iCloud nchekwa jupụtara -esi etinye gị iPhone n'ime DFU mode na-eme a DFU weghachi . Ọ bụrụ na nke ahụ edozighi nsogbu ahụ, laghachi na edemede a iji mụta ihe nhọrọ gị dị.
Banyere Nsogbu Akụrụngwa
Dị ka anyị tụlerela, iPhone gị na-arapara ebe na mmalite usoro. Mgbe ị gbanye iPhone gị, otu n'ime ihe mbụ ọ na-eme bụ nyocha ngwa ngwa nke ngwaike gị. Nnoo, gị iPhone na-arịọ, 'Processor, ị na-e? Ezi! Ebe nchekwa, ị nọ ya? Ọ dị mma! ”
Gị iPhone agaghị agbanye ma ọ bụrụ na otu akụrụngwa akụrụngwa anaghị amalite, n'ihi na ọ enweghị ike Gbanwuo. Ọ bụrụ na gị iPhone mebiri emebi , enwere ezigbo ohere ị ga - achọ idozi ya iji dozie nsogbu a.
6. Ndozi Nhọrọ
Ọ bụrụ na i werela aro niile dị n’elu na akara ngosi Apple bụ ka rapaara na ihuenyo iPhone gị, ọ bụ oge iji rụzie ya. Ọ bụrụ na ịnọ n’okpuru ikike, Apple kwesịrị ikpuchi ndozi ahụ ọ bụrụ enweghi mmebi ozo. O di nwute, oburu na iwere aro m n’elu ma iPhone gi adighi aru oru, udiri umi ma obu mmebi aru nwere ike buru uta.
Ọ bụrụ na ị họrọ ịrụzi gị iPhone site Apple , ha nwere ike ọ ga-adị mkpa ka ha dochie ya iji dozie nsogbu a. Ọ na-abụkarị, akara ngosi Apple na-arapara na ihuenyo n'ihi nsogbu na bọọdụ mgbagha nke iPhone gị, nke ahụ abụghịkwa ihe Apple nwere ike gbanwee maka akụkụ ọhụrụ. Ọ bụrụ na ị na-achọ nhọrọ dị ọnụ ala, Pulse bụ na-achọ mmezi ọrụ nke na-arụ ọrụ dị mma.
iPhone: Ọ Dịkwaghị Nọgide Na Apple Logo
Olileanya, site na nke a iPhone gị dị mma dị ka nke ọhụrụ na ị gaghị enwe nsogbu ọzọ. Anyị atụlewo ọtụtụ ihe kpatara akara Apple nwere ike ịrapara na ihuenyo nke iPhone gị, yana ngwọta dị iche iche metụtara nke ọ bụla.
Nke a bụ nsogbu nke na - anaghị alaghachi mgbe emechara ya - belụsọ na enwere nsogbu ngwaike. Enwere m mmasị ịnụ otú akara Apple si rapaara na iPhone gị na mbụ yana otu ị siri dozie ya na ngalaba nkọwa dị n'okpuru.